यो हो अचम्मको बाघ जसले गीत गाएर आफ्नो आमालाई बोलाउने गर्छ, जसका कारण विश्वभर भयो भाइरल (भिडियो सहित) – Sapana Sanjal
यो हो अचम्मको बाघ जसले गीत गाएर आफ्नो आमालाई बोलाउने गर्छ, जसका कारण विश्वभर भयो भाइरल (भिडियो सहित)
July 16, 2021 110
Sapana Sanjal : रुसको एक चिढियाघरमा आजकल एक बाघ आफ्नो सुरिलो स्वरका कारण प्रख्यात बनेको छ । विटास नामको यो बाघ आठ महिनाको छ । यो बाघ अमुर प्रजातिको हो । यो प्रजातीका बाघ सबैभन्दा ठूला, तेज र चलाख हुन्छन् । विटासलाई जब आफ्नी आमाको ध्यान खिच्नुपर्छ, तब ऊ गाउन सुरु गर्छ । विटासले चराले सुसेलेज जस्तै आवाज निकाल्छ ।
सर्बियाको बरनाल चिडियाखाना बस्ने विटासको आवाज कतिपयका नजरमा चराले सुसेलेजस्तो र कतिपयलका लागि बाँदरको हाँसोजस्तै छ । विटास यही आवाजका कारण सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
चिढियाखानाका कर्मचारीका अनुसार यस बाघका धेरै भाई–बहिनी छन् । त्यसकारण उनीहरुबाट आफ्नी आमाको ध्यान आफुतर्फ खिच्न यो बाघ चिच्याउने गर्छ । विटास त्यतिबेलासम्म चिच्याउँछ, जबसम्म आफ्ना सबै काम छाडेर आमा ऊ समक्ष आउदिँनन् ।
अमुर प्रजातीको बाघ संसारकै सबैभन्दा ठूलो बाघ हो, तर यो प्रजाती खतरामा छ । पूर्वी रुसमा यस प्रजातीका केवल ६ सय बाघ आफ्नो प्राकृतिक घरमा सुरक्षित छन् । सोभियत संघको विघटनपछि सिकारी बढ्दा उनीहरुको अस्तित्वमा संकट पैदा भएको हो ।
Prevयो हो अचम्मको बाघ जसले गीत गाएर आफ्नो आमालाई बोलाउने गर्छ, जसका कारण विश्वभर भयो भाइरल (भिडियो सहित)
Nextयुवतीले गरिन् बाँदरसँग अनैतिक कार्य (भिडियो हेर्नुहोस्)
राष्ट्रपतिको राजीनामा ?
महामारी नियन्त्रणका लागि चिनले नेपाललाई दियो यी चार सुझाव
नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सबैभन्दा दूरदर्शी र प्रभावशाली प्रहरी महानिरीक्षक बरालको निधन
चर्चित नायिका प्रियंका कार्की सुत्केरी हुने दिन नजिकिएका बेला के भयो फेरी आयुष्मानलाई? (1279)
बुवाको कम्मरको भाग पुरै कु`हिएको छ ,छोरिहरुले ओछ्यानमै दिशा पिसाब गराउछन् ,यतिसम्म गर्छन्,कठै बिचरा (हेर्नुस् भिडियो ) (835)